क्यान पदाधिकारीहरू एकअर्काको नाम नलिई क्रिकेटमा बाधा उत्पन्न गराउने तत्त्व सक्रिय हुन थालेको भन्दै दोषारोपणमा उत्रिन थालिसकेका छन् । नेपाली क्रिकेटमा यसको के असर पर्न सक्छ ?
मलेसिया ११ र क्यान प्रेसिडेन्ट ११ बीच जनवरी २०, २१ र २३ मा ३ म्याचको क्रिकेट सिरिज पोखरामा हुने तय थियो । त्यसका लागि दुवै टोली पोखरा पुगिसकेका थिए । तर आयोजक नेपाल क्रिकेट संघ क्यान सिरिज हुनेमा आफैँ ढुक्क थिएन ।
कतिसम्म भने, खेल हुने अघिल्लो दिनसम्म पनि क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेल विश्वस्त हुन सकिरहेका थिएनन् । मौसमी प्रतिकूलताले खेल हुन नसक्ने उनले लख काटे । “टिमहरूले अभ्याससमेत गर्न पाएका छैनन् । पिच पनि ठीक छैन । भोलि खेल हुनेमा शंका छ,” उनले ५ माघमा सुनाए । तर क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द सिरिज समयमै सम्पन्न हुनेमा ढुक्क देखिए । भन्छन्, “अमेरिका, ओमान र नेपालबीचको त्रिकोणात्मक सिरिजअघिको म्याच भएकाले तयारी पनि राम्रै छ । मलेसियाली टिमसँग नेपालले एक्सपोजर म्याच खेल्छ । सिरिज नहुने भन्ने कुरै छैन ।”
नभन्दै अध्यक्ष चन्दकै कुरा सही ठहरियो । नेपालले जनवरी २० र २२ मा खेलेको दुवै म्याच जित्दै एक खेलअगावै सिरिज आफ्नो पक्षमा पार्‍यो । मलेसियासँगको सिरिज पनि सकियो । तर यही सिरिजबाट झन्डै चार महिनाअघि निर्वाचित क्यान कार्यसमितिको पुरानो टिमभित्र नयाँ दरार भित्रियो । अध्यक्ष चन्द काठमाडौँबाहिर रहने भएकाले समन्वय अभाव हुने भन्दै सचिव प्याकुरेलले आफू निकटकासँग मात्रै सल्लाह गरेर अघि बढ्न खोजेको आरोप छ । उपाध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठ र बाग्मती प्रदेशका सदस्य अमीरवीर पाण्डे सचिव प्याकुरेल निकट छन् । कोषाध्यक्ष रोशनकुमार सिंह, सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्य विक्रम विष्ट, प्रदेश ५ का प्रशान्त मल्ल, कर्णाली प्रदेशका पदम खड्कालगायत अध्यक्ष चन्दको पक्षमा छन् ।
क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय आईसीसीले ससर्त निलम्बन फुकुवा गरेपछि क्यानको हातगोडा केही बाँधिएका छन् । उसले आफूखुसी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँदैन । आर्थिक पाटोमा पनि आईसीसी बढी हावी हुन्छ । पहिले हातगोडा खुकुलो पार्ने कि कार्यक्रम लागू गर्ने भन्नेमा पनि क्यान पदाधिकारीबीच मतैक्य छैन ।
चार वर्षसम्म क्यान निलम्बन हुँदा नेपालको क्रिकेट विकासको गति रोकिएको थियो । समग्रमा नेपालमा घरेलु क्रिकेट ब्रह्मनालमा पुगेसरह थियो । क्रिकेटमा सरोकार राख्नेहरू भन्ने गर्थे, ‘क्यान निलम्बनमा छ । त्यसैले क्रिकेटको विकास पनि रोकियो ।’ अवस्था कतिसम्म दुरुह थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताअघि बन्द प्रशिक्षण राख्न पनि आईसीसीको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्थ्यो । यस्तोमा घरेलु प्रतिस्पर्धा हुने त कुरै भएन । प्रतियोगिता नै आयोजना नभएपछि नयाँ खेलाडी जन्मिएनन् । ट्रायलबाट टिम छनोट गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा नयाँ अनुहारले टोलीमा प्रवेश पाउने सम्भावनै भएन । हातमा गन्न मिल्ने खेलाडीमध्येबाट टोली छान्नुको विकल्प थिएन ।
अहिले अवस्था केही बदलिएको छ । ससर्त भए पनि क्यानमाथिको निलम्बन फुकुवा भएको छ । आईसीसीका अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को रोहवरमा भएको निर्वाचनबाट क्यानको नयाँ कार्यसमिति चुनिएको छ । निर्वाचित कार्यसमितिले आफूहरू नयाँ सोच र शैलीका साथ अघि बढ्ने उद्घोष पनि गरेको थियो । तर ३ महिने हनिमुन समय कटिसक्दा पनि नेपालमा क्यान छ भन्ने आभास दिने काम हुन सकेको छैन । क्रिकेटमा पुरानै मान्छे भए पनि नयाँ टिमको रूपमा आएको क्यानसँग अब के गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना अभाव देखिएको छ । कतिसम्म भने क्यानले यसबीचमा प्रशासनिक काम गर्न आफ्नो कार्यालयलाई समेत व्यवस्थित गर्न सकेको छैन ।
नेपाली टोलीका पूर्वकप्तान पवन अग्रवाल निलम्बन फुकुवा भइसके पनि क्यान पुरानै अवस्थाको रहेकाले काम गर्न चुनौतीपूर्ण हुने स्वीकार्छन् । भन्छन्, “जे काम गर्न पनि आर्थिक पाटो पहिले सबल हुनुपर्छ । अहिले आईसीसीले आर्थिक पाटोमै क्यानलाई नियन्त्रणमा राखेको छ । तर बितेको ३ महिनामा आईसीसीसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाएर निलम्बन फुकुवा गर्दा राखेका सर्तलाई पनि फुकुवा गर्न पहल गर्नुपर्थ्यो । यसमा क्यान चुकेको छ ।”
११ असोजमा विशेष साधारणसभामार्फत चुनिएको क्यान नेतृत्वले गरेको पछिल्लो निर्णय भनेकै राष्ट्रिय टोलीको छनोट र ज्ञानेन्द्र मल्ललाई कप्तानको जिम्मेवारी दिने काम मात्रै हो । अध्यक्ष चन्द त्यसलाई मान्दैनन् । भन्छन्, “हामीसँग जादूको छडी छैन । कार्यसमितिकै बैठक दुई पटक मात्रै बसेको छ । चाडवाड पनि परे । एक महिना त सागकै तयारीका लागि लाग्यो । संघलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ । प्रायोजकसँग कुरा भइरहेका छन् । देखिने गरी काम नभए पनि हामी चुप लागेर बसेका छैनौँ ।’
उनले यसो भनिरहँदा क्यानको विधानमै उल्लेख भएको प्रबन्ध निर्देशक, वित्त व्यवस्थापक र अन्य प्रशासनिक कर्मचारीसमेत राख्न सकेको छैन । वार्षिक क्यालेन्डर बनाउनमै अलमलिएको क्यान नेतृत्वसँग ५ वर्षभित्र के गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका पनि छैन । “क्यालेन्डर बनाएर मात्रै के गर्नु ? आईसीसीले वार्षिक यति खर्च गर भनेर सीमा तोकिदिएको छ । त्यति खर्चले पुग्दा पनि पुग्दैन । बाँकी खर्चको जोहो गर्न हामी जुटिरहेका छौँ । त्यसैले केही काम नभएजस्तो देखिएको हो,” चन्दले काम नभएको स्वीकारे ।
जनवरी १५ भित्र वार्षिक कार्यक्रम बनाएर पठाउन आईसीसीले भने पनि त्रिकोणात्मक सिरिजमा व्यस्त हुनु परेकाले त्यसमा समेत व्यवधान उत्पन्न भएको उनले सुनाए । नेपालले २ सातापछि विश्वकप क्रिकेट लिग २ मा अमेरिका र ओमानसँग घरेलु मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । ६ वटा वान डे खेलमध्ये नेपालले दुवै टोलीसँग २–२ वटा म्याच खेल्नेछ । नेपालले आगामी २ वर्षभित्र विश्वकप छनोटको शृंखलामा ३२ वटा खेल खेल्नेछ । यसबाहेक क्यानले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारी गरेको छैन ।
निलम्बन फुकुवापछि क्यानले आयोजना गर्न लागेको यो पहिलो ठूलो प्रतियोगिता हो । तर त्यहीअनुसारको टिम तयारी पनि हुन सकिरहेको छैन । पोखरामा बन्द प्रशिक्षण गराएर क्यानले मलेसियासँग ३ म्याच खेलाएको छ । मलेसियाभन्दा निकै माथिल्लो स्तरको टोली अमेरिका र ओमानसँगको प्रतिस्पर्धाका लागि ती खेल पर्याप्त हुँदैनन् । लिग २ खेल्न नेपाली टोलीलाई समय पर्याप्त नभएको अध्यक्ष चन्द स्वीकार्छन् । यस्तोमा नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक उमेश पटवाल कामविशेषले नेपाल बाहिर छन् । “जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि खेल्नका लागि नेपाली टोली तयार छ । समय हाम्रो अनुकूल छैन तर नतिजा अनुकूल ल्याउने प्रयास हुनेछ,” अध्यक्ष चन्द भन्छन् ।
प्रशिक्षक पटवाललाई परिवर्तन गर्न लागिएको भन्ने चर्चाको सचिव प्याकुरेल खण्डन गर्छन् । उनका अनुसार पारिवारिक कामको सिलसिलामा पटवाल नेपालबाहिर रहेका मात्रै हुन् । राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षक अहिलेसम्म पटवालै हुन् । राखेपले आईसीसीसँग समन्वय गरेर ल्याएको प्रशिक्षक पटवाललाई अहिले नै परिवर्तन गर्ने मनस्थितिमा क्यान छैन ।
उनका अनुसार सबै ध्यान त्रिकोणात्मक सिरिजमा केन्द्रित भएकाले क्यान निस्क्रियजस्तो देखिएको हो । आईसीसीसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सिरिज महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उनले त्यसैमा ध्यान दिएकाले अन्यथा नसोच्न पनि आग्रह गरे ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानको स्तरोन्नतिदेखि मूलपानीको मैदानलाई अभ्यास म्याचका लागि तयार पार्ने काम पनि यसबीचमा भएको सचिव प्याकुरेल बताउँछन् । उनका अनुसार आईसीसीकै क्युरेटर आएर मैदानको जाँच गरिसकेको छ ।
यसबीचमा क्यानको कार्यसमितिले जिल्ला संघलाई १ र प्रदेशलाई ३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । तर आर्थिक स्रोतको चाँजोपाँजो मिलिनसकेको अवस्थामा यो निर्णय क्यान आफैँलाई घातक हुने देखिन्छ । पूर्वकप्तान अग्रवाल भन्छन्, “सबै काम गर्नलाई पैसा चाहिन्छ । खेलाडीलाई सेन्ट्रल कन्ट्रयाक्ट, अन्य प्रतियोगिता जे गर्न पनि पैसै चाहिन्छ । अहिलेसम्म पनि कार्यालय व्यवस्थित हुन सकेको छैन । पहिले आफू व्यवस्थित हुनुपर्छ अनि मात्रै अरू कुरामा ध्यान दिने हो ।”
अध्यक्ष चन्दका अनुसार क्यान अहिले भित्रभित्रै काम गरिरहेको छ । प्रायोजकसँग विभिन्न चरणका वार्ता भइराखे पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने बेला भइनसकेको उनी सुनाउँछन् । भन्छन्, “राष्ट्रिय टोलीदेखि उमेर समूहसम्मका लागि प्रायोजक खोज्ने काम भइरहेको छ । तर यहाँ हल्ला बढी गर्‍यो भने काममा भाँजो हाल्नेहरू धेरै छन् । टिमभित्र र बाहिर पनि क्यान नेतृत्व असफल होस् भनेर कामना गर्नेहरू छन् । त्यसैले गुपचुप काम गर्नु परेको हो ।”
कार्यसमितिका १७ जना मात्रै होइन, बाहिर रहेकालाई पनि साथै लिएर हिँड्न आफू तयार रहेको बताउने अध्यक्ष चन्दलाई उनकै पदाधिकारीले विश्वास गरेजस्तो देखिँदैन । टिमभित्र सल्लाह कम गर्ने र एक्लै अघि बढ्न खोज्ने एवं भौगोलिक क्षेत्रीयतामा बढी विश्वास गर्ने आरोप उनीमाथि लाग्न सुरु भइसकेको छ ।
अचम्म के भने सचिव प्याकुरेल पनि टिम भावनाअनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । तर क्यान पछिल्लो समय एउटा टिमजस्तो देखिएको छैन । एकअर्काको नाम नलिई उनीहरू क्रिकेटमा बाधा उत्पन्न गराउने तत्त्व सक्रिय हुन थालेको भन्दै दोषारोपणमा उत्रिन थालिसकेका छन् ।
नेपाली खेलकुदको राष्ट्रिय रोग नै हो, संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई बढी महत्त्व दिने । नेतृत्व गर्ने व्यक्ति चलायमान भए मात्रै संस्था अघि बढ्न सक्छ भन्ने उदाहरण त फुटबल संघले दिइसकेको छ । तर फुटबलमा पछिल्लो समय भित्रिएको एकअर्काप्रति अविश्वास गर्ने रोग क्रिकेटमा यति चाँडै सल्किनुचाहिँ सुखद संकेत होइन ।